Linux kuronga 1. Sumo pfupi | Linux Vakapindwa muropa
Nguva zhinji isu vedu vanonyora zvinyorwa kana kupindura maforamu nezveLinux, vanowira mutsika yakaipa yekutora zvinhu zvisina basa izvo vashandisi vevashandi vasingafanire kuziva. Ndokusaka nguva nenguva kazhinji zviri nyore kuti uongorore pfungwa dzekutanga.
Vazhinji uye vanhu vanofarira kuita zvirongwa uye iyo mibvunzo pamusoro peapi akavhurwa sosi sarudzo dzekushandisa anowanzoitika. Uye apa ndipo patinoratidzazve imwe tsika yakaipa, yekuita sevanyanyisi vezvitendero vanotsvaga kumanikidza dzimwe nzira dzavanoda vasingatarise zvinodiwa nemushandisi anobvunza.
1 Linux kuronga
1.1 Chii chiri kuronga
1.2 Musiyano uripo pakati pekukodha uye kuita chirongwa
1.3 Musiyano uripo pakati penzvimbo dzekuvandudza dzakabatanidzwa uye kodhi edhita
Ndokusaka kuzadzisa runyorwa rweakavhurika sosi maturusi anowanikwa eLinux, ayo atinoita nguva nenguva, tichaongorora dzimwe pfungwa.
Chii chiri kuronga
Yedu nzira yekudyidzana nemakomputa uye nhare mbozha inotevera paradigm yakagadzirwa muXerox Company Research Labs muPalo Alto. Apple kutanga uye Microsoft yakazoteedzera ikoni uye yewindows modhi yavo yekushandisa masystem. Kwemakore, iOS neApple vanozotora iyo imwechete chirongwa ichigadzirisa iwo kumafoni uye mapiritsi.
Pamberi peiyo graphical interface, iyo nzira yekutaurirana nekombuta yaive yekunyora iyo mirairo mune terminal. Mune ramangwana zvinogona kukwana kungofunga nezve zvatiri kuda kuti zviite.
Asi chero nenzira yatinotaurirana nayo, komputa inoda kuudzwa maitiro ekupindura kuzvikumbiro zvemushandisi. Ndozvazviri kuronga nezve izvi.
Chirongwa chiri ipapo ipa chishandiso nemiraidzo yakaratidzwa mumutauro wechirongwa iyo yaunogona kunzwisisa.
Musiyano uripo pakati pekukodha uye kuita chirongwa
Kunyangwe aya mazwi anonzwika achidudzirwa semazwi akafanana haasi iwo. Kukodha, urombo nezviri pachena, kunyora kodhi kugadzira chirongwa kana webhusaiti.
Zvirongwa zvinosanganisira maitiro ekuvandudza chirongwa kubva panguva iyo dambudziko remushandisi rinozivikanwa kusvika chikumbiro chikagadzirwa kuti chigadziriswe. Zvakare, iyo yekuchengetedza uye yekuvandudza nhanho inosanganisirwa.
Muenzaniso wekare wekudhinda "Mhoro Nyika" pachiratidziri, ipapo chiitiro chekunyora nekuti haina chinangwa chekugadzirisa dambudziko uye hazvienderane nemamwe matanho ese eichi chiitiko.
Basa rekuronga chiitiko chakaomarara chinoda zviridzwa zvakawanda semidziyo yekuongorora kodhi, masisitimu, makomputa, vagadziri ve database, graphical interface vagadziri uye vagadziri.
Chinhu chekutanga chatinofanira kuziva kubatsira mushandisi ndeche kana iwe uchida kudzidza kuronga padanho rehunyanzvi kana kungo nyora zvirongwa. Sezvo kukodha kuchingoda kunyora mitsara mune chero chirongwa chemutauro uye, kugona hakutsvagwe, uye hakuna kuitirwa kuti kodhi inogona kuvandudzwa kana kunzwisiswa nevamwe vanhu, chero chirongwa chekunyora.
Kubva pamhinduro kumubvunzo iwoyo isu tichaziva kana iwe uchinyatso gadzikana nekodhi mhariri kana yakasanganiswa budiriro nharaunda. Asi, haugone kupindura izvozvo kana ukasanzwisisa kuti mutsauko chii. Izvi ndizvo zvatichaedza kupindura mune ino chinyorwa.
Kana iri yekunyora kodhi, chero mupepeti kana izwi processor inogona kuzviita. Ingo ita chokwadi chekuchichengeta mune fomati iyo yekushandisa system inogona kuona sekodhi kodhi. Musiyano uripo ndewekuti isu hatina chero rudzi rwechishandiso chekubatsira kuona kuti hapana zvikanganiso.
Mamwe emavara edhita akaisirwa mukuparadzirwa kweLinux anosanganisira akasiyana plugins kuti aashandure kuva edhita yekodhi, asi kuti tirege kuvhiringidzika hatisi kuzogara panhau iyoyo.
Musiyano uripo pakati penzvimbo dzekuvandudza dzakabatanidzwa uye kodhi edhita
Kuti iite ipfupi, mutsauko uripakati peswiss mauto banga uye screwdriver. Nzvimbo dzakabatanidzwa dzekusimudzira dzinounza chinenge chero chinhu chingangodiwa muchirongwa chebasa kusanganisira kunyora kodhi, kuzadzikiswa, kushambadzira kweguvhu, kugadzirisa dambudziko, kuyedza uye kuumbiridza.
Kune akakomberedzwa mamiriro ekuvandudza ayo akagadziridzwa kune yakasarudzika mitauro mutauro uye mamwe anoenderana neakawanda. Iko kune zvekare mamwe eanoshanda masystem senge Android kana Arduino.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux chirongwa 1. Sumo pfupi
Zvakanaka ndinokuudza kuti ini handisi nyanzvi yekugadzira asi Linux yakandiitira zvakanaka kwazvo kwemakore gumi nerimwe ikozvino. Unyanzvi chete 'hwemberi' hwandanga ndichida kunyora maBash / Python zvinyorwa uye kupopota nemamwe mafaira ekugadzirisa. Zvese zvimwe zvaunzwa kwandiri neve OpenSource nharaunda, yakarongedzwa uye yakagadzirira kushandisa. Nyowani kubva paWindows muna 11, ndakavenga iyo terminal kunge pasina munhu, uye ikozvino rave chandinoda chishandiso uye chandinoshandisa zvakanyanya :)
Ndingadai ndisingazive maitiro ekushandisa chikuru kubva pakutanga kugadzirisa dambudziko, kuumbiridza, nekupa graphical interface uye kuigovera, asi ini ndinoziva mashandisiro ekugara aripo mapurogiramu nezvinyorwa uye kuzvibatanidza kuti uwane chero chinodiwa mhedzisiro, saka mukuita hazvidiwe chirongwa nehunyanzvi, uye zvakadaro ndakakwanisa kugadzirisa matambudziko akaomarara eindasitiri einjiniya mumakambani ari pakati nepakati.